Ny saram-serivisy ho an'ny fampiantranoana sy ny fikojakojana ny OSF - manohy ny serivisy i AfricaArXiv - AfricaArXiv
navoakan'ny Jo Havemann on 14T Febroary 2020 14T Febroary 2020
'Miatrika fanakatonana ireo mpizara mpanomana malaza noho ny olana ara-bola'
Vaovao mikasika ny natiora, 1 feb 2020, doi: 10.1038/d41586-020-00363-3
Ity no lohatenin'i lahatsoratra momba ny Nature Nature omaly izay niompana amin'ny saram-panompoana OSF.
Eto ihany ny AfricaArXiv hijanona!
Manohy ny serivinay mandritra ny taona 2020 izahay ary miasa amin'ny paikady fitantanana ny tondrozotra sy famatsiam-bola hohanina mandritra ny taona maro ho avy ary hametrahany ny AfrikanaArXiv ao amin'ny tontolon'ny Open Science mitombo amin'ny kaontinanta afrikana.
Natsangana a pejy fandraisana anjara eto amin'ny tranokalanay sy ny fampielezan-kevitra am-pifandraisana ao amin'ny sehatra opencollective.com.
mandrakotra ny fampiantranoana OSF & fandoavam-bola fikojakojana
drafitra, fanamorana ary fanaterana ny sehatra sy serivisy AfricaArXiv
Fanohanana fitsangatsanganana mba hanoloranao ny AfricaArXiv amin'ny federasiona
Ny antsipiriany fanampiny momba ny teny 'Afrikana'
Tamin'ny Jona 2018, isika nanangana ny AfricaArXiv tamin'ny fiaraha-miasa amin'ny Center for Open Science ary efa hatramin'ny nanekeny akaiky ny 100 sora-tanana président sy ny paositra, ny tatitra nataon'ny mpianatra ary ny fifandraisana fohy.
Nandritra ny taona 2020, ny Ivotoerana ho an'ny Siansa misokatra dia nangataka anay ny hanangona ny USD 999.- ho an'ny fampiantranoana sy fikojakojana ny fotodrafitrasa OSF ary nanohana azy ireo tamin'ny famantarana ireo fomba fiasa sy ny soso-kevitra amin'ny fiaraha-miasa amin'izy ireo, ohatra fanomezana NSF ary ny antsoy avy amin'ny Initiative Chan Zuckerberg.
Ny fanambaram-bola dia nanery anay handinika ireo serivisy sy ny vidiny hampahafantarina ny tenantsika izay misy. Tsy ela dia nazava fa te-hanome safidy mihoatra ny iray amin'ny mpiara-monina aminay izahay hametraka ny asany. Faly izahay noho ny COS noho ny nandefasany ny AfricaArXiv niaraka taminay ary nahatonga anay hahatongavana hatreto. Tonga izao ny fotoana ahafahantsika mitombo sy manitatra ny fiaraha-miasa amin'ny lafiny samihafa amin'ny Open Science sy Open Access mba hahatonga azy ireo ho azo tanterahina sy haingam-pandeha ho an'ny mpikaroka ao amin'ny kaontinanta afrikanina. Tiantsika ny hanohy io dia io miaraka amin'ny COS sy ny fotodrafitrasa OSF, izay manome serivisy marobe kokoa ankoatra ny fanomanana tahiry; ny mpahay siansa dia afaka mihazakazaka ny tsingerin'ny tetik'asa rehetra ao amin'ny OSF ao anatin'izany ny datasets, preregistrations ary ny fanovana.
Ankehitriny izahay dia mandray an-jatony ny asa voaray, ny ankamaroan'ny sora-tanana, ny fampisehoana vitsivitsy ary ny afisy.
Ny fanomanana tena mahomby indrindra momba ny fahitana dia https://osf.io/preprints/africarxiv/y3bp7/ miaraka amina fisintona 1k bebe kokoa
Na dia miadana aza ny fanenjehana, dia mahazo vahana hatrany ny fanomanana ho toy ny dingana mifameno amin'ny famoahana an-gazety. Miara-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminay izahay hanasongadinana ireo mpikaroka Afrikana, indrindra indrindra, ny tombontsoa azo avy amin'ny fiomanana amin'ny fifandraisana ara-tsiansa manerantany.
Ny serivisy dia mandoa vola, izany no zava-misy. Fantatsika ny ilana azy ary sarotra ho an'ny rehetra voakasik'izany fa lesona tsara ihany koa amin'ny famolavolana foto-drafitrasa azo tanterahina sy maharitra hatramin'ny voalohany. Satria manara-maso ny tenany ny sehatra akademika dia mila manao ny matematika ny mpandray anjara rehetra ary mamantatra ny fomba tsara indrindra hizarana ny teti-bola ary iza no mandoa vola. Ankoatry ny vola mivantana ho an'ny fotodrafitrasa, misy vidiny hafa tsy voatanisa tafiditra amin'ny fampiantranoana sy ny fikojakojana fiomanana, ohatra ho an'ny serivisy iraisana ao amin'ny sehatra izay omen'ny antoko fahatelo, HR, marketing sns.
Mpandray anjara, fanamby ary tranga
Hatramin'ny nanombohanay dia nanamboatra ny loharanon-tenantsika manokana (fotoana sy vola) amin'ny fananganana ilay sehatra izahay, ao anatin'izany ny tranokalanay ary ny fidirana amin'ireo mpihaino kendrena. Mihevitra izahay fa ny mpikaroka dia tsy tokony handoa ny serivisy fa kosa, manantona trano famakiam-bokin'ny andrim-panjakana, governemanta, fananganana, ary mpamatsy vola - na Afrikana sy iraisam-pirenena. Ho an'ny fangalarana vahoaka dia nametraka pejy fandraisana anjara amin'ny https://info.africarxiv.org/contribute/ ary mamolavola paikady famatsiam-bola sy tondrozotra ho an'ny 2020 sy taona ho avy.
Noho ny toe-javatra sarotra izay hita ao amin'ny kaontinanta, nojerentsika aloha ny momba ireo mpandray anjara ary nifanakalo hevitra tamin'ireo manampahaizana isan-karazany. Te hiara-hiasa amin'ireo mpandray anjara afrikanina izahay ary indrindra hiatrika fanampiana ara-bola iraisam-pirenena. Tamin'ny volana martsa 2020 dia mikendry ny hanangana ny fampielezan-kevitra ataonay hoentina isika ary manantena ny fandraisana andraikitra tsy tapaka mba hahafahanay manarona ny fandaniana mitohy ao anatin'izany ny vidin'ny OSF amin'ny 2020.
Voafetra ny vola indrindra atsy Afrika ary mifatotra eran'izao tontolo izao amin'ny firafitra efa lany andro. Rehefa miova ny serasera manam-pahaizana amin'ny fangaraharana sy ny fampiharana Open Science amin'ny ambaratonga maneran-tany dia mikendry feo mafy sy miray hina avy any Afrika izahay hanangana rafitra famatsiam-bola - ohatra amin'ny alàlan'ny IOI - https://investinopen.org/.
Fahasarotana amin'ny fandrakofana vola
Ny marketing dia asa be dia be ary misy vola be ho an'ny fitsangatsanganana sy ora maro atokisana mba hahazoana antoka fa ny mpandray anjara amin'ny fikarohana dia nianatra momba ireo tombontsoa nomanin'ny famatsiam-bola omena ho an'ny vondrom-pikarohana. Tsy izany ihany no nitranga any Afrika, Amerika Latina, ary Azia fa manerana izao tontolo izao. Ny fanamby hafa any amin'ny faritra dia ny famerana ny famatsiam-bola, karama ambany ho an'ny mpiasan'ny HE sy ny famoahana fotodrafitrasa. Ny ankamaroan'ny vondrom-piarahamonina dia mitarika ny asa an-tsitrapo amin'ny tahiry fiomanana ary tsy manana loharanom-bola voafetra hanaovana ny asa ilaina amin'ny fanangonam-bola, izay ao aminy sy any an-kafa koa dia asa manontolo andro ho an'ny ekipa lehibe kokoa.
Ny paikady fitohizantsika hatreto
Ho fanampin'ny fiaraha-miasa tsy tapaka amin'ny Center for Open Science hampiasa ny fotodrafitrasa efa nomaniny ho an'ny OSF dia namboarinay ny sehatra kami tamin'ny fiaraha-miombon'antoka amin'i Zenodo sy ScienceOpen. Izany dia mamela ny mpikaroka afrikanina hisafidy ny tahirin-kevitra amin'ny preprint izay tadiaviny ary mifototra amin'ny fitakian'izy ireo:
Noho izany, hanohy hiasa hatrany isika amin'ny fiantohana ny serivisantsika amin'ny fanaingoana ho an'ny vondrom-pikarohana Afrikanina.
Ireo serivisy manokana sy fanampiny ary tombontsoa omen'ny sehatra tsirairay dia voatanisa ao https://info.africarxiv.org/submit/.
Ao amin'ny Zenodo dia mampiasa kaonty vondrom-piarahamonina izahay maimaimpoana maimaimpoana hananganana sy hitahirizan'izay rehetra manodidina ny lohahevitra rehetra.
Miaraka amin'ny ScienceOpen dia misy ny fifanarahana azontsika ampiasaina maimaimpoana ny fotodrafitrasa efa nomaniny maimaim-poana amin'ny 2020 ary mamerina ny faran'ny taona. Eo an-tampon'ny vavahadin'ny fandefasana, ny rafi-pitaterana ao amin'ny ScienceOpen dia manana famerenana fandinihana fanazaran-tena manara-penitra izay manampy ambaratonga serivisy hafa.
Ny OSF dia manome ny tahiry fitahirizana ny tsingerin'ny fikarohana iray manontolo. Anjaran'ny mpahay siansa ny mifidy izay sehatra tiany.
Tamin'ny fiandohan'ny asan'ny AfricaArXiv, ny fahitantsika lava maharitra dia ny famoronana sehatra iray izay mampiantrano ny kaontinanta afrikanina, mazoto amin'ny toeram-pikarohana isan-karazany any amin'ny faritra, hiantohana ny fananana ny famoahana ny fikarohana afrikanina ary hanomezana hery ny mpikirakira fikarohana afrikanina amin'ny fiaraha-miasa. fiaraha-miasa, fifanakalozana fifanakalozana eo amin'ny sehatra manerantany.
Manantona hetsika hafa, fikambanana, mpiara-miombon'antoka hafa izahay mba hahatanteraka izany. Mifandraisa aminay mba handray anjara.
Natsangana a pejy fandraisana anjara ao amin'ny tranokalanay ary misy fiaraha-miasa Open iombonana fanentanana vahoaka.
Mandritra ny herinandro ho avy, manangana ny tetika stratejika isika hifanerasera amin'ireo mpiray tsikombakomba ambony momba ny Afrikana Ambony sy ny fikarohana ho an'ny mpikambana sy ny fifanarahana fiaraha-miasa.
Mifandraisa aminay hiresaka hevitra sy soso-kevitra: info@africarxiv.org.
Tags: Ivotoerana ho an'ny siansa misokatraOpen Framola momba ny siansa misokatrasaram-panompoana
Sokajy Select Category Hetsika (1) General (10) Fomba fiteny (1) Fidirana misokatra (9) Open Science (8) Soraty (5) Famoahana (4) Fifandraisana ara-tsiansa (2) Fandefasana (4)
Legioma afrikanina AfricaOSH ASAPbio Berlin Ivotoerana ho an'ny siansa misokatra amin 'ny Conference Crastina Discoverability DIYbio Edinburgh Sakafo ara-tsakafo FORCE11 FORCE2019 IGDORE fiteny fiteny samihafa fomba fahafahana misokatra Safidy fidirana malalaka Misokatra ny Sarintany Fahalalana misokatra siansa Conference Conference Open Open Framola momba ny siansa misokatra Open Hardware Hardware osc2018 fiaraha-miasa Voahangy Ihuoma Osirike Peer Review preprint famoahana ScienceOpen saram-panompoana siansa ara-tsosialy maharitra ubushakashatsi
Miverina amin'ny volana aprily 2018, ny hevitra hanamboarana ny kitapom-bolan'ny Openax Africa dia teraka tamin'ny fihaonana an-tampon'ny AfricaOSH voalohany tany Kumasi, Ghana. Ny fanombohana dia noraketina tao amin'ny teny anglisy tamin'ny Nature Index, Quartz Africa, Hamaky bebe kokoa…
Praesent felis massa dolor. at libero. Sed